यी पाच रासी भएका श्रीमतीहरु जसले आफ्नो श्रीमान लाइ आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य बनाउछन जानिराखौ ! »
यी पाच रासी भएका श्रीमतीहरु जसले आफ्नो श्रीमान लाइ आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य बनाउछन जानिराखौ ! शा’स्त्रका अ’नुसार फरक फ’रक मान्छे पछि मान्छे’को स्व’भाव पनि फर’क फरक रहेको हुन्छ । वि’वाह प’छि श्री’मान श्री’मतीको बिच कस्तो स’म्बन्ध हुन्छ भन्ने चा’सो धेरै’को मन’मा रहेको हुन्छ । वि”वाह पछि कसै कसैको स’म्बन्ध नटिक्ने, सम्ब’न्धमा फित’लो आउने हुन्छ भने क’सैको जीवनभर टि’क्ने गर्दछ । सम्ब’न्ध कस्तो ब’नाउने भन्ने श्रीमा’न् श्री’मतीले एक अर्का प्रति देखा’उने जवा’फदेहीता मा भर पर्छ । केही श्री’मतीहरू आफ्नो श्री’मानलाई धेरै मा’या गर्ने हुन्छन् भने कोही श्रीम’ती पतिलाई नि’यन्त्रणमा ल्याउन ख’प्पिस हुन्छन् । आज हामी ती रा’शिहरूको बा’रेमा चर्चा गर्नेछौ । जुन ३ राशि भएका महि’लाले आफ्नो पति/श्री’मालाई आफ्नो खु’ट्टामा झु’क्ने बनाउँछन् ।
मेष राशि : साँचो कुरा र तथ्यमा अडिक रहने बानि भएमा हुन्छन् मेष राशि हुने महिलाहरु। यस राशि हुने महिलाहरु साथै हरेकको विश्वास पनि सजिलै जित्ने क्षमताका पनि धनि हुने हुँदा सबैको प्रिय हुने गर्छन्। शान्त स्वभावका हुने भएता पनि आफ्नो निर्णयमा जिद्दी हुने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउने गर्छन् यस राशि हुने महिलाहरु।
मकर राशि : यस राशि हुने महिलाहरु धेरैनै शान्त हुने गर्छन्। गम्भीर प्रकृतिका हुने हुँदा यस राशिका महिलाहरु कम बोल्ने गर्छन्। हरेक निर्णय गर्ने क्षमता हुने हुँदा आत्मनिर्भर पनि हुने गर्छन् मकर राशिका महिलाहरु। तर अरुको अगाडी कुनै पनि हालतमा नझुक्ने हुँदा आफ्नो पतिलाई आफ्नो अगाडी झुक्न वाध्य बनाउने गर्छन् भने आफ्नो पतिलाई राम्रोसंग नियन्त्रण गर्न मकर राशि भएका महिलाहरु खप्पिस हुन्छन्।
वृश्चिक राशि : यस राशि भएका महिलाहरुलाई रहस्यमयी मान्ने गरिन्छ। रिसाएको खण्डमा सजिलै सम्झाउन नसकिने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउँछन्। हरेक कार्य पूर्ण रुपले फत्ते गर्ने क्षमाता हुने र आत्मविश्वास पनि उच्च हुने हुँदा आफ्नो पति भन्दा हरेक कार्यमा अगाडी हुन्छन् यस राशि भएका महिलाहरु। जसको कारण पतिहरु झुक्न वाध्य हुन्छन्।
पतिलाई दबाएर राख्छन यी राशिहरु
कन्या राशि : यो राशी भएका महिलाहरुमा श्रीमानलाई सजिलै काबुमा राख्ने क्षमता हुन्छ । यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन । आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,दण्ड, भेदको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन् ।
काठमाडौँ- यी ३ रासी भएका महिलाहरु जुन पुरुष लाइ पाउनको लागि धेरै नै जोड गर्दछन हेरौ...